NIVADIKA NY FIARA NITATITRA IREO MPIVAVAKA : 11 naratra ka iray tapa-tongotra
Telo no ahiana mafy ny ainy ao amin’ny hopitaly PZaGa Androva ary olona valo hafa kosa no naratra mafy. 28 novembre 2017
Io no vokatr’ilay lozam-pifamoivoizana nitranga teo aminy Pk 524+200 teo amin’ny tanànan’i Mavozaza, fokontany Besely lalam-pirenena fahaefatra tao Berivotra ny alahady teo, araka ny tatitra azo avy amin’ny borigadin’ny zandarimaria misahana ny lalana. Nivadika ilay fiara mpitatitra ao amin’ny zotra faha 13 nofaina hitondra ireo mpino katolika teto Mahajanga, avy nanao fivahinianana masina teny Berivotra, hoy ny kaomandin’ny borigady Raharinasy Denis.
Tamin’ny iray ora sy 50 minitra no nipoiran’ity loza mahatsiravina ity, rehefa nitodi-doha nody ireo mpivavaka. Olona miisa 23 no tao anatiny. Tsy nahazo ny fiolahana ilay mpamily izay nandeha mafy ka nihorirana ny fiara, nivoaka ny lalana ary nivadika. Mpandeha miisa 11 no naratra ary nentina eny amin’ny hopitaly avy hatrany. Iray tamin’izy ireo dia tapaka mihitsy ny tongony. Zazakely iray koa no tsy nahatsiaro tena araka ny nambaran’ireo olona nahita ny loza, izay nandray andraikitra avy hatrany namoaka ireo mpandeha tao anatin’ilay fiara.
Ny fiaran’ny masera izay niara-dalana tamin’izy ireto ihany no nitondra ireo naratra teny amin’ny hopitaly. Voalaza moa fa mpivavaka ao amin’ny fiangonana Victoire Rasoamanarivo Tsararano ireo niharan-doza ireo. Ny harivan’iny ihany dia tonga teny amin’ny hopitaly i Mopera Abel, mpitarika ity fiangonana ity nandray an-tanana ny fikarakarana sy ny fitsaboana ireo naratra. Voalaza fa efa nody avokoa ireo naratra rehefa nahazo fitsaboana sahaza afa-tsy ilay tapa-tongotra ka voatery tsy maintsy tazomina tsaboina eny amin’ny hopitaly. Tsy mbola hita ilay mpamily, efa eo an-dalam-pikarohana azy ireo mpitandro filaminana manao ny fanadihadiana. Misy kosa milaza fa lasa nody any amin’ny mamany ilay mpamily rehefa nahazo fitsaboana satria anisan’ireo naratra koa.
Ny mahavariana, hoy kosa ny olona sasany dia tsy voalohany no nitrangan’ny lozam-pifamoivoizana ireo avy manao fivahinianana eny Berivotra Belobaka ity. Efa nisy toy izao koa vao roa taona lasa izay, izay namoizana ain’ny mpino maro ka mbola ireo fiara taksibe mpanao zotra aty ambonivohitra nahazo fifanarahana manokana hatrany no nahatonga ny loza tamin’izany. Matetika anefa dia zatra mitondra taksibe eto an-tampon-tanàna izy ireo fa tsy zatra lalam-pirenena. Manampy trotraka ny fisotrosotroana sy ny zesta fifaninana mandeha mafy ho an’ny samy mpamily tanora saina.